Baphumela obala uShwi noMtekhala ngoTshatha - Ilanga News
Home Izindaba Baphumela obala uShwi noMtekhala ngoTshatha
Baphumela obala uShwi noMtekhala ngoTshatha
Isegudwini eyokuthi kwakumele ingoma yabo ihlukanise ngo-2005
Ngumsakazi woKhozi FM uKhathide “Tshathugodo” Ngobe.
AKUTHI diki eqenjini likamaskandi, uShwi nomtekhala mayelana nodaba oselufake intandokazi yomsakazi wokhozi FM, uKhathide “Tshathugodo” Ngobe emanzini abilayo lokuthi wabhala kuFacebook ukuthi kwakufanele kube yingoma yalo ethi “Ngafa” ehlukanisa unyaka ngo-2005 kodwa kwagcina kube yiMalaika ngenxa yezizathu ezithile.
Isegudwini indaba yokuthi uShwi noMtekhala kwakumele badle umhlanganiso ngale ngoma yabo ekwi-albhamu esihloko esithi “Wangisiza Ubaba” yango-2004 kodwa kwagcina kungenzekanga ngenxa yokuthi ngaphakathi emsakazweni kwavunyelwana ngokuthi makube yiMalaika.
UMandlendoda “Shwi” Xaba uthe akukho abakukhalelayo ngokungawini kwengoma yabo ngoba yakwenza konke okwakumele ikwenze emakethe futhi yabahlomulisa okuningi.
Utshele ILANGA ukuthi kabazange balahlekelwe yilutho, ngakho-ke abanankinga nezindaba ezisabalele.
“Le ndaba akuyona into entsha kithina, yinto osekuneminyaka sayizwa ixoxwa. Ngiyacabanga ukuthi nakhona emsakazweni kwakungelula ukuthi bahlukanise unyaka ngengoma yethu ngoba kwakungakaze kwenzeke ukuthi umasikandi uhlukanise unyaka.
“Siyakuqonda ukuthi nawo umsakazo wawubuka ukuthi bangathini abalaleli bawo ngoba yayingaka-ze yenzeke le nto emlandweni.
“UTshatha ubekhuluma ngomlando kamasikandi mhlawumbe-ke wase elimala ngokuphula imigomo yomqashi wakhe kodwa kasinayo inkinga thina, akukho okwasilahlekela.
“Kasiwuhlukanisanga impela unyaka kodwa iqembu laqashwa ngendlela eyisimanga, ladayisa kakhulu emakethe kuze kube manje ingoma isathandwa izwe lonke,” kusho uShwi.
Umbhalo okusolwa ukuthi ubhalwe nguTshatha kuFacebook uthi: “Ngo-2005 empeleni kwaba nguShwi no-Mtekhala owadla ubhedu. Unyaka wawehlukaniswa yimina noLinda Mr Magic, kwaba nesizathu esaholela ukuthi kube yi-Malaika ehlukanisayo, uShwi walala isibili.
“Okunye okwethusa wukuthi umasikandi ugile leziya zimanga ezagilwa nguShwi, manje kwakungelula-ke ukuthi kube umasikandi owehlukanisayo ngoba kwakungakaze kwenzeke ukuthi ingoma kamasikandi ibe kuleliya zinga, futhi kwaba novalo lokuthi abantu bazokwemukela kanjani lokho.
“Abaphathi bangaleso sikhathi bagcina benqume ukuthi kube yiMalaika nakuba izwe lonke lalilindele ukuba kuqopheke umlando kube ngu-Shwi owayevimbanise izwe lonke.
“Nasemoyeni kwachazwa, yingakho kwaze kwaba yiyona ingoma kaShwi eyadlalwa kabili ngaphambi kweyeMalaika nangemuva kwayo. Khumbulani phela ukuthi kwakungavotwa ngaleso sikhathi, ngakhoke akubanga nenkinga ngalokho futhi kwakuyinhloso emsulwa nje nabalaleli bangaba nankinga nayo,” kusho umbhalo.
Okhulumela iSouth African Broadcasting Corporation (SABC), uNkz Mmoni Seapelelo, uthe kuyiqiniso ukuthi uTshatha umisiwe kusenziwa uphenyo lwangaphakathi.
“Imininingwane yophenyo ngeke siyikhulume emphakathini, iphakathi kweSABC noKhathide. Uma sekuqediwe ukuphenywa, imiphumela yakhona izoxoxwa nomnikazi walo nezinhlaka ezifanele.
Okwamanje iSABC nokhozi FM bacela ukunikwa ithuba lokuphothula uphenyo ngaphakathi nokubheka imigomo yakhona,” kusho uNkz Seapelelo.
Previous article“Simbiwe ngobumnyama isidumbu”
Next articleSilambele imiklomelo isilomo seChiefs